Navoakan'i Sony ny famolavolana manaraka an'ny UWP-D Series Mikrofon-tariby tsy fantatra amin'ny WWP-D izay manasongadina ny NFC SYNC - NAB Show News avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcaster ofisialy an'ny NAB Show - NAB Show LIVE
Home » News » Navoakan'i Sony ny famolavolana manaraka an'ny UWP-D Siri-tariby Mikrofon-tserasera malaza WWP-D izay manasongadina ny NFC SYNC
Navoakan'i Sony ny famolavolana manaraka an'ny UWP-D Siri-tariby Mikrofon-tserasera malaza WWP-D izay manasongadina ny NFC SYNC
Nambara voalohany tao amin'ny NAB 2019, Sony'S vaovao Andiany UWP-D nanomboka ny fandefasana ireo mikrofotra tsy misy fotony.
Ny UWP-D21 mikrofonolojia misy dia misy izao, miaraka amin'ny UWP-D22 sy UWP-D26 dia alefa ao amin'ny volana Desambra.
Ho fanampin'ny kalitao audio avo lenta, ny rafitra an-tariby UWP-D dia manome fanohanana ny Multi-Interface Shoe ™ (MI kiraro) ary fantsom-pifandraisana nomerika vaovao. Ny andiany UWP-D dia mamela interface tsara an-tsary digital mivantana ary manome kalitao avo lenta miaraka amin'ny feo malefaka amin'ny alàlan'ny fanitsakitsahana ny fizotran'ny D / A sy A / D miaraka amin'ny adaptatera kiraro SMAD-P5 MI sy ny camcorder mifanaraka amin'ny kabary. Sony's PXW-Z280 sy PXW-Z190 XDCAM, mampiasa ny rindrambaiko firmware 3.0, ary koa ny α7R IV (ILCE-7RM4) 35mm fakan-tsary feno.
Mizara vaovao fampahalalana toy ny haavon'ny haavon'ny RF, sata fandraisam-peo ary ny fampandrenesana batterie ho an'ny mpandefa izany ary aseho azy eo amin'ny mpizara. Mampiasa kiraro SMAD-P5 MI, alefa amin'ny alàlan'ny mpandray an-tariby tsy misy fifandraisana tariby ny mari-peo.
Ny endri-javatra "NFC SYNC" vaovao dia natao ho an'ny filaharana matetika. Amin'ny alàlan'ny fitazonana fotsiny ny bokotra NFC SYNC amin'ilay mpandray dia segondra vitsy, dia mandeha ho azy avy hatrany ny fahazoana mifanentana, ary mamela an'io fantsona io halefa any amin'ny mpanondrana amin'ny alàlan'ny 'Near Field Communication' (NFC).
Ny habe sy lanjan'ny rafitra ampiasain'ny tamba-jotra tsy manam-paharoa dia mamela ny asa fanalahidy takiana amin'ny fampiharana marobe, anisan'izany ny vaovao, lavitra, fanadihadiana, fanatanjahantena ary famokarana fampakaram-bady.
Ny andiany UWP-D vaovao dia ahitana ireto fizarana audio ireto manaraka ireto:
UWP-D21: URX-P40 Portable mpandray sy Transmision Bodypack UTX-B40 (efa misy ankehitriny)
UWP-D22: URX-P40 Portable mpandray sy ny mikrofon-tanana WX-M40 an-tànana an-tànana (nokasaina alefa amin'ny Desambra)
UWP-D26: URX-P40 Portable mpandray, Transmision Bodypack UTX-B40, sy Transmitter Plink-on UTX-P40 (nokasaina alefa amin'ny Desambra)
Raha mila fanazavana fanampiny momba ity andiany ity dia tsidiho azafady pro.sony/products/wireless-audio/uwp-series.
#audio Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor Sony Sony Audio Spears & Arrows Ultra HD Forum Video Production rafitra mikrôfo tsy misy filaminana Microfone Wireless	2019-10-09
Previous: NAB NY 2019: TVU Networks 'TVU-based TVU Talkshow ary AI-TVU MediaMind Open varavarana ho an'ny famokarana horonantsary mahomby sy mahomby kokoa
Next: Misafidy LiveU ho an'ny fisamborana horonantsary mivantana miaraka amin'ny ekipany Drone ny fitsipi-pitenenana Derbyshire UK